घाटमा पनि राष्ट्रिय गान ! « Janata Samachar
घाटमा पनि राष्ट्रिय गान !
‘सयौं थुँगा फूलका हामी’ देशभक्तिले सवैको ओठ ओठमा झुण्डिने राष्ट्रिय गान हो । राष्ट्रिय गान बज्दा त्यसको सम्मानमा सबैजना उठ्नुपर्ने नियम छ । राष्ट्रिय गान सामूहिक रूपमा एकसाथ उभिएर, दायाँ हात देब्रे छाती अर्थात् मुटुमाथि राखेर, गाइन्छ । संगीतवद्ध वा बिनासंगीत आवाज निकालेर राष्ट्रप्रतिको सम्मान भाव जगाउने गरी राष्ट्रिय गान गाइन्छ । बर्दीधारी सैनिक– प्रहरीले राष्ट्रिय गान बजाउँदा सतर्क आसनमा उभिएर सलाम गर्छन् । यी हुन् राष्ट्रिय गान गाउने तरिका ।
सरकारले मुलुकभरका फिल्म हलले चलचित्र शुरु हुनुअघि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय गान बजाउन निर्देशन दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले एक साताअघि पशुपतिनाथ मन्दिरमा आरती अगाडि राष्ट्रिय गीत बजाउन निर्देशन दिएको छ । ।नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘राष्ट्र’ भन्नाले जनता, सरकार तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको कुनै देश, मुलुक भन्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय गान’ भन्नाले ‘राष्ट्रले मान्यता दिएको गाना, राष्ट्रको गान, राष्ट्रिय गीत भनिएको छ। यो नेपाल सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ‘स्वदेशगान’ हो। ‘राष्ट्रिय गीत’ भन्नाले ‘आफ्नो राष्ट्रप्रति सबै जनताको असीम श्रद्धा र भक्ति जगाउन कुनै राष्ट्रिय उत्सव वा सामूहिक समारोहमा गाइने, राष्ट्रको वा राष्ट्रका प्रतीकको गुणगाथाले भरिएको गीत, राष्ट्रिय गान’ उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गान मुलुकको राष्ट्रियता झल्काउने गीत हो । यसमा देशको इतिहास र संस्कृति समेटिएको हुन्छ । जनतामा त्यसप्रतिको समर्पण दर्शाइएको हुन्छ । ‘राष्टियता जनाउने समारोहमा राष्ट्रिय गान बजाउनु ठीक हो,’ तर ‘सिनेमा हल, आरती जताततै राष्ट्रिय गान अनुपयुक्त देखिएको छ ।
मन्दिर नजिकै आर्यघाट छ । घाटमा जुनसुकै बेला लास जलिरहेको हुन्छ । मन्दिरमा राष्ट्रिय गान बज्ने, नजिकैको घाटमा लास जलिरहने । मन्दिरमा बज्ने राष्ट्रिय गानको सम्मानमा आर्यघाटमा रहेका किरियापुत्री र मलामी समेत उठ्नुपर्ने भएको छ
राष्ट्रिय गान बज्दा त्यसको सम्मानमा सबै उभिनुपर्ने हुन्छ छ  । राष्ट्रिय झन्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोगसम्बन्धी कायविधि २०६९ अनुसार चलचित्र शुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गान बजाउन अनिवार्य गराइएको हो । मुलुकमा हुने कुनै पनि उत्सव तथा औपचारिक कार्यक्रम, फौजी प्रकृतिका सामेली, सैन्य सम्मान, खेलकुद समारोह र विद्यालय प्रार्थनामा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने भएको छ  । रेडियो र टेलिभिजनमा सम्पूर्ण कार्यक्रमको शुरुमा र अन्त्यमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने छ । राष्ट्रिय गान अवधिभर सबैलाई उभिन अनिवार्य रूपले अनुरोध गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय गान सम्बन्धी पछिल्लो निर्णय अनौठो मानिएको छ । फिल्म हलमा व्यक्ति मनोरञ्जनको लागि जान्छ, राष्ट्रिय गीत सुन्न होइन्। राष्ट्रिय गानको निर्णयप्रति अहिले विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
पञ्चायतकालमा फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान बज्दा दर्शक अनिवार्य उठ्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसबेला पनि पशुपतिनाथ मन्दिरमा आरती गर्नुअघि राष्ट्रिय गान बजाउनु पथ्र्यो । मन्दिर नजिकै आर्यघाट छ । घाटमा जुनसुकै बेला लास जलिरहेको हुन्छ । मन्दिरमा राष्ट्रिय गान बज्ने, नजिकैको घाटमा लास जलिरहने । त्यहीकारणले पशुपतिनाथ मन्दिरमा आरती अघि राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने निर्णय विवादित बन्यो । त्यसपछि मन्दिरमा आरतीअघि राष्ट्रिय गान बनाउनुपर्ने निर्णय रद्द भयो । अहिले फेरि पंचायतकालकै निर्णय सदर गर्न खोजिएको छ । मन्दिरमा बज्ने राष्ट्रिय गानको सम्मानमा आर्यघाटमा रहेका किरियापुत्री र मलामी समेत उठ्नुपर्ने भएको छ । यसले राष्ट्रिय गानकै अनादर हुने टीकाटिप्पणी समेत हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय गान प्रयोग कार्यविधिमा कुनै पनि साँस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रदर्शनका क्रममा कार्यक्रमको प्रारम्भ तथा समापनमा राष्ट्रिय गान तथा धुन बजाउनु पर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिको उपदफा (१) मा ‘राष्ट्रिय गान या धुन बज्दा सबैले सतर्क अवस्थामा उभिएर शिर ठाडो गरी उच्च र उल्लासपूर्ण आवाजमा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रिय उत्सव वा विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम तथा फौजी प्रकृतिका सामेली, सैन्य सम्मान, खेलकुद समारोह र विद्यालय प्रार्थनामा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्ने व्यवस्था छ  । रेडियो र टेलिभिजनमा सम्पूर्ण कार्यक्रमको शुरु र अन्त्यमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय गान सम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले यतिखेर सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । सञ्जालमा निर्णयको कडा आलोचना समेत भएको छ ।